Ngaba iTekhnoloji ye-Deepfake iya kuyichaphazela njani intengiso? | Martech Zone
Ngaba iTekhnoloji ye-Deepfake iya kuyichaphazela njani intengiso?
NgoLwesithathu, uDisemba 30, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 30, 2020 Douglas Karr
Ukuba awukazami okwangoku, mhlawumbi usetyenziso lweselfowuni bendilenwaba kakhulu kulo nyaka Ingcaciso. Isicelo seselfowuni sikuvumela ukuba uthathe ubuso bakho ubuyise ubuso bakhe nabani na okwenye ifoto okanye ividiyo ekwiziko ledatha labo.
Kutheni ibizwa ngokuba yi-Deepfake?
Deepfake Yindibaniselwano yemigaqo Ukufunda nzulu kwaye Inkohlakalo. Ubunzulu bokuphakamisa ukufundwa komatshini kunye nobukrelekrele bokufakelwa bokusebenzisa okanye ukuvelisa umxholo kunye nokulalelwayo okunokubakhohlisa.
The Ingcaciso Ukusetyenziswa kweselfowuni kulula ukuyisebenzisa kwaye iziphumo zinokuhlekisa. Ndiza kwabelana ngezinye zeziphumo zam apha. Inqaku elisecaleni… abakhohlisi kakhulu, baneentloni nje, bayothusa kwaye bayathandana.
Iposi elibiwe Douglas Karr (@kwanele)
Khuphela iApp engaphezulu
Ngaba i-Deepfakes iyasoyikisa ngaphezu koBuhle?
Ngelishwa, siphila kwihlabathi apho ulwazi lwe-disinformation luxhaphake. Ngenxa yoko, itekhnoloji enzulu yenzekile ayinakusoloko isetyenziselwa into emsulwa njengondenza ndidanise okanye ndenze inkwenkwezi kumdlalo bhanyabhanya… zinokusetyenziselwa ukusasaza ulwazi olungachanekanga ngokunjalo.
Khawufane ucinge, umzekelo, imifanekiso, iaudiyo, okanye ividiyo esebenzisa ubuchwepheshe obunzulu ukuseta ezopolitiko. Nokuba ichongiwe njenge-deepfake, isiphumo sinokuhamba ngesantya seendaba zentlalo ukuze sisebenzise umbono wovoto. Kwaye ngelishwa, ipesenti ebalulekileyo yabavoti- ngelixa incinci- inokukholelwa.
Nantsi ividiyo entle evela kwi-CNBC ngesihloko:
Njengoko unokuqonda, abalawuli kunye netekhnoloji yokufumanisa iya ithandwa kakhulu ukuzama ukulwa netekhnoloji enzulu. Ngaphandle kwamathandabuzo izakunika umdla…
Zingasetyenziselwa njani ukuThengisa iinzulu?
The Itekhnoloji yokuvelisa imithombo yeendaba ezinzulu ngumthombo ovulekileyo kwaye uyafumaneka kwiwebhu yonke. Ngelixa siyibona kwimiboniso bhanyabhanya yanamhlanje (imifanekiso kaCarrie Fisher ukusukela ngeminyaka yoo-1970 yayisetyenziswa kwiRogue One), asikhange siyibone nakwezentengiso… kodwa siza kuyibona.
Ukuthembana kubalulekile kulo naluphi na ubudlelwane phakathi komthengi kunye negama. Ngaphandle kwezilungiso ezisemthethweni, naliphi na ishishini elijonga ukuhambisa ubuchwepheshe obunzulu kwintengiso kunye neenzame zentengiso kuya kufuneka linyathe kancinci… kodwa ndiyawabona amathuba:
Imidiya yabucala Iimveliso zinokuvelisa imithombo yeendaba ngenjongo enye yokuba abathengi bazo bazifake. Khawufane ucinge abayili befashoni, umzekelo, abenza ukuba umntu akwazi ukufaka ubuso nobuso babo kwividiyo yeembaleki. Bayayibona indlela le fashoni ebonakala ngayo ngokubonakalayo (ngokuhamba) ngaphandle kokuzama iimpahla.
Imidiya ehlukeneyo -Ukurekhoda nokuhlela iividiyo kunokuba kubiza kakhulu kwaye iimveliso zihlawula ngakumbi nangakumbi ukubonakaliswa kwabantu kunye neenkcubeko ezibonisiweyo. Kwixesha elizayo elikufutshane, uphawu lunokurekhoda ividiyo enye-kodwa lisebenzise itekhnoloji enzulu ukwahlula umyalezo ukumela inani labantu kunye neenkcubeko ezahlukeneyo ngaphakathi kwawo.
Ukudityaniswa kweVidiyo Iimpawu zinokuba nabameli bazo bokuthengisa okanye iinkokeli ezikwinkwenkwezi kwiividiyo ezinzulu kodwa ezenzelwe umntu ukunxibelelana ngokuthe ngqo nethemba okanye umxhasi. Olu hlobo lwetekhnoloji sele lukhona ngeqonga I-Synthesia. Ngelixa ndikholelwa ukuba iimveliso kufuneka zichaze ubunzulu, le yindlela yokubambisa ukuthetha ngokuthe ngqo kumntu ngamnye ngokobuqu.
Imidiya eguqulweyo Iimpawu zinokusebenzisa abachaphazeli kwiilwimi zonke. Nanku umzekelo omangalisayo kaDavid Beckham- apho ukufana kwakhe kuya kutsala umdla, kodwa umyalezo uguqulelwe ngokufanelekileyo. Kule meko, basebenzisa amanye amazwi kunye netekhnoloji yenzulu yokuhambisa umlomo ... kodwa banokuthi basebenzise inzulu ukubuyisela endaweni yeaudio.
Kuyo yonke le mizekelo, ubunzulu abukho ukukhohlisa kodwa ukuphucula unxibelelwano. Umgca omncinci… kwaye amashishini kuya kufuneka alumke xa ehamba!
Masikugqibe oku kwinqaku elungileyo…
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa indawo yam yokudibanisa Indawo yenkqubo. Ndicebisa kakhulu ingxelo ehlawulelweyo ebonelela ngetoni yemithombo yeendaba eyongezelelweyo ukuba ungcungcutheke nayo.
tags: umanyanisoukufunda okunzulunzuluItekhnoloji enzuluhlaziya
I-AudioMob: Khalisa kwiintengiso zoNyaka oMtsha ngeeNtengiso zeAudio
Imibuzo eli-15 ekufuneka uyibuze malunga ne-API yabo ngaphambi kokukhetha iqonga